‘ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन हुने तर रेशम चौधरी अपराधी ?’ – Online Bichar
Online Bichar 7th March, 2019, Thursday 1:18 PM
कैलाली, २३ फागुन । कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलापछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले फैसला गरेलगत्तै अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठक बसेर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । राजपाको समर्थन फिर्ता भए पनि वर्तमान सरकारलाई सरकार सञ्चालनमा कुनै असर पर्दैन । यद्यपि राजनीतिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाका लागि नैतिक सङ्कट अवश्य उत्पन्न भएको छ । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपा नेपालको अगामी रणनीति, रेशम चौधरी प्रकरणमा चाल्ने कदमलगायतका विषयमा सो पार्टीका अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
–१६ वटा कारणमध्ये रेशम चौधरीलगायत अन्य कारणहरू पनि छन् । झुठा मुद्दा फिर्ता, कैदीबन्दी रिहा, घाइतेको उपचार लगायतका राजनीतिक माग पनि छन् । हामीले सरकारमा सहभागिता र हिस्सेदारी खोजेका थिएनौं । हामीले न्याय मात्र खोजेका थियौं । हतियार बोकेर त्यत्रो आन्दोलन गरी हजारौँ मान्छेको ज्यान लिने व्यक्ति चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुन हुने र देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा जाने । मुद्दा त उनीहरूमाथि पनि छन् नि ! अर्काे आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने व्यक्ति कसरी अपराधी भए ? यो कस्तो न्याय हो ? अहिलेको सरकार आन्दोलनबाट स्थापित भएको सरकार हो । यसले पक्कै पनि आन्दोलनकारीमाथि न्याय गर्नेछ भनी हामीलाई विश्वास लागेको थियो । आन्दोलनको मर्म र पीडा बुझेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ अहिले । तैपनि न्याय हुन सकेन । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वको सरकारले गठन गरेको मधेस, थारुहटलगायतका आन्दोलन अध्ययन उच्च स्तरीय छानविन आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हामीले माग गरेका छौँ । त्यो आयोगले कैलाली टीकापुर घटनाको बारेमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । तर सरकारले त्यो प्रतिवेदन लुकाइरहेको छ । सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए सारा जनताले थाह पाउँथे कि रेशम चौधरी अपराधी थिए वा आन्दोलनकारी ? पहिचानका लागि आन्दोलन गरेकालाई सरकारले अपराधीकरण गर्दैछ । त्यो सरकारको ठूलो भूल हो ।
–हामी विगत १२ वर्षदेखि आन्दोलनमै छौँ । यो देशमा हरेक किसिमको विभेदको जबसम्म समाप्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । परस्थितिअनुसार आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भइरहन्छन् । विगतमा हामीले जसका लागि, जेका लागि आन्दोलन गरिरहेका थियौँ त्यसको सन्देश त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ । अब हामीले राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौं । देशमा उत्पीडनमा परेका समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मधेसी, पिछडा वर्गलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौं । विगतमा हाम्रो आन्दोलनलाई जुन प्रकारको बद्नाम गराउन खोजियो, जुन प्रकारको लान्छना लगाउन खोजियो ती कुराहरू अब हुँदैन । यो राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन हुन्छ ।
युद्धको अवस्थामा वार्ता हुन्छ भने हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । हामी वार्ताका पक्षमा छौँ तर वार्ता सम्मानजनक हुनुपर्छ । हामीले विगतमा सरकारसँग निकै अपेक्षा गरेका थियौँ । सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनाएका थिए तर सरकारले आफ्नो विश्वास कायम गराउन सकेन । त्यसैले वार्ता पनि कस्तो हुने कुन मोडेलमा हुने कुरा हामी विचार गर्दैर्छौं ।